IMEX America Inotarisa Kumangwana Nechinangwa uye Positivity
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » IMEX America Inotarisa Kumangwana Nechinangwa uye Positivity
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Kuvakazve • ushanyi • USA Kuputsa Nhau
Iko kuverengera kuri pamusoro! IMEX America inovhura mumavhiki mashoma ichiunza mikana yakawanda yebhizinesi, zvikamu zvekudzidza uye mukana weindasitiri iyi - pakupedzisira - yekubatanidza zvakare. Iyo showa, iri kuitika munaNovember 9-11 muLas Vegas, ine zvakawanda zvitsva maficha uye chirongwa chekudzidza chakanyatso kuumbwa nedenda nezvirongwa zvekuvaka zvakanaka kune ramangwana rakajeka. Kubatanidzwazve kwebhizimusi rezviitiko zvebhizinesi rakagadzirirwa kuve rakakosha sezvo IMEX America iri kupemberera yayo yegumi shanduro pamwe neimba nyowani, Mandalay Bay.
Vatengi vanogona kusangana nevatengesi vepasirese vakatora zvikamu zvese zveindasitiri kuIMEX America.
Vanosvika mazana matatu vatengi vakapihwa vanosimbiswa kushandisa IMEX America senge chikuva chekutanga bhizinesi.
IMEX timu yakagadzira yakazara dzidzo chirongwa icho chinovhenekera mwenje pane ramangwana rebazi uye maitiro ekuvaka kumberi zvakanaka.
Vanoda kusvika zviuru zvitatu vatengi vakagamuchirwa vava kusimbiswa kubva mhiri kweNorth America nepasi rese, pamwe nemazana evatengi vanoenda - kunyanya kubva kuUSA - vese vari kushandisa IMEX America senge chikuva chekutanga bhizinesi. Bhizinesi rinoramba riri pamoyo pechiratidziro uye vatengi vanogona kusangana nevatengesi vepasirese vakatora zvikamu zvese zveindasitiri.
Izvi zvinosanganisira nzvimbo dzeEuropean Austria, Belgium, Czech Republic, Croatia, France, Germany, Greece, Italy, Ireland, Malta, Netherlands, Portugal, Spain, Switzerland, Scandinavia, uye UK. Australia, Korea, Japan, New Zealand, neSingapore ndedzimwe dzenyika dzeAsia-Pacific dzakasimbiswa pamwe neKenya, Morocco, Rwanda, neSouth Africa kubva kuAfrica. Kubva kuAtlanta neCalgary kuenda kuLa uye Vancouver, veUS uye veCanada varatidziri vari kunze. Ivo vanobatana munzvimbo zhinji dzeLatin America dzinosanganisira Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, uye nezvimwe.
Ese makuru makuru epasirese emahara emahotera ari kuenda pamwe neakawanda madiki, emahotera emahotera, uye huwandu hwevanopa tekinoroji hunokura nezuva. Tarisira kuti uone Cvent, ZviitikoAIR, Hopin, Swapcard, RainFocus, uye MeetingPlay pakati pevamwe.
Chinangwa & Chakanaka
Nekuziva kuti hunyanzvi hunoda kukwidziridzwa mushure megore rakaoma, timu yeIMEX yakagadzira chirongwa chakazara chedzidzo chinovhenekera ramangwana rebazi uye maitiro ekuvaka kumberi zvakanaka. Iyo yemahara yekudzidza chirongwa paIMEX America inotangisa ne Smart Muvhuro, inofambiswa neMPI, munaNovember 8 iyo inosanganisira dzidzo yakazvipira yesangano, yemakambani neyevashandi vehunyanzvi. Dzidzo inoenderera mberi nehurongwa hwenzvimbo dzekudzidzisa, matafura anopisa misoro uye misangano mukati memazuva matatu ekuratidzira - ese akagadzirirwa kugadzirisa akasiyana masitayimu ekudzidza. Zvirongwa zvakarongedzwa kuita matsva matraki, kusanganisira Kugadzira mukutaurirana, Kusiyana uye kuwanika, Kugadzira uye tekinoroji; Bhizinesi kudzoreredza, Konisheni nhaurirano, Kuzvimirira kushambadzira, uye Sustainability.
Chikwata cheHilton chinokurukura maitiro akanakisa avakagamuchira mukati megore rapfuura mu Kudzoreredza zvine chinangwa - Zvinogoneka mhinduro dzekugadzira nekumisikidza zviitiko mune yepashure-denda renyika. Marin Bright kubva kuSmart Meetings anogovera yake "post COVID yekubudirira bhuku" inovhara nhepfenyuro yekugadzira, kontrakiti yakakosha uye nzira dzekutaurirana mu Sirivha linings: Misangano yezvidzidzo zvevashandi kubva panguva yeCOVID. Chikwata cheMaritz chichaongorora kudzidza kwavo kubva kudenda uye neruzivo rwekuti michina mitsva yezvigadzirwa zvemagetsi ingatsigire sei zviitiko zvemberi mune Kuvhiringidzika munguva yekudzoka: Maritz kudzorerazve chiitiko chechiitiko kuburikidza nehunyanzvi hwekugadzira.
Tinogona sei kufungidzira misangano nezviitiko kuburikidza nezvakaitika zviitiko? Ndiwo mubvunzo unobvunzwa naDerrick Johnson muchikamu chakeBasa rakakosha: Iyo ramangwana rezviitiko muzera redhijitari nezano rekuti ungaita sei vateereri "vakadzvanywa manhamba". Kubatanidza iyo digital neiyo yepanyama ndiyo inotariswa Zviitiko zveHybrid zvinoyambuka nzvimbo yacho yezviitiko zvakagovaniswa zvepanyama uye nedhijitari. Muchikamu chino, Dax Callner, Strategy Director paSmyle, vanogovana mazano anoshanda mukugadzira zviitiko zvakagovaniswa uye network kune vatori vechikamu vari kujoinha online (URL) uye mumamiriro epanyama (IRL).
Nguva yasvika yekubvisa rusarura uye kugamuchira zvakasiyana - uye bhizinesi zviitiko zvebhizimusi iri munzvimbo huru yekutungamira nemuenzaniso. Musiyano, saka, inoumba tambo yepakati mune dzidzo, zviitiko, uye zvitsva zveIMEX America.
Iye Anoreva Bhizinesi, chiitiko chakabatanidzwa neIMEX nemagazini tw, inotsigirwa neMPI, inoongorora zvakasiyana, kuenzana kwevanhukadzi uye kupiwa simba kwevakadzi. Kana zvasvika kune idzi nyaya, vakadzi nevarume vanowanzo taura nezve mumwe nemumwe, asi kwete nemumwe. Izvi zvakagadzirirwa kuchinja mu Sarudzo yaMadzimai: Kukurukurirana pamusoro pekusiyana uye kuenzana kwevanhukadzi uko ASAE's Michelle Mason uye chipangamazano Courtney Stanley vanokoka varume vaviri muhurukuro. Iko zvakare kune mukana wekujoinha madiki madiki ekukurukurirana nevakadzi avo vari trailblazers mumunda mavo. Ashly Balding, Yakabatana Yakasarudzika Mahotera Kumarudzi Akawanda; Meg Fasy, ZviitikoGIG; Tracy Stuckrath, ibudirire! misangano & zviitiko; Juliet Tripp, Chemical Kutarisa; uye Human Biography yaNisha Kharé yakagadzirirwa kugovera Zvidzidzo zvehutungamiriri kubva kuvakadzi vatungamiriri.
Zvidzidzo zvedzidzo kuongorora zvimwe zvinhu zvekusiyana zvinosanganisira Kugarisa vanhu vakaremara pa - munhu uye misangano uye zviitiko uye Kuisa iri basa: Kusiyana kwemarudzi muindasitiri yezviitiko uko Anofara Makumi makumi maviri nemaviri Elena Clowes anotsanangudza zvakawanikwa pabepa rekutsvagisa yesangano pamusoro pemarudzi akasiyana siyana.
The itsva IMEX | EIC Vanhu & Planet Musha pane yekuratidzira pasi inotsigira kusimudzira, kusiyanisa, kukanganisa kwevanhu uye kudzorera. Vabatsiri vanosanganisira LGBTMPA, ECPAT USA, Tourism Dhivhosi Matters, Misangano Maindasitiri Fund, Misangano Zvinoreva Bhizinesi, SEARCH Foundation, Pamusoro & Beyond Foundation, uye Chenesa Nyika. KHL Boka richange richikoka varipo kuti vavake Clubhouse - nzvimbo yekutamba yakasarudzika yemwana anorwara nevamwe vake vechikoro.
Zviitiko zvemagariro zvinounza sizzle & kushamisika
Ipo iyo showa ichiri muzinda webhizinesi uye kudzidza, kune zvakare mikana yakawanda yekubatana kunze kwenzvimbo yekuratidzira. Bespoke kushanya kunopa yakaderera kuLas Vegas kunyangwe iri chikafu chakanakisa, zvakavanzika zviitiko kana iyo yemukati nzira munzvimbo mbiri dzinoyevedza: Kesari Palace uye Mandalay Bay. Kune zvakare chikonzero chekupemberera pamanheru zviitiko Site Nite inoitika kuResorts World nyowani, siginicha yeMPI Foundation siginecha Rendezvous kuDrais uye EIC Hall yeVatungamiriri kuMGM Grand.
“Vanhu vazhinji vakadaidza IMEX America kuti 'kudzoka kumba kweindasitiri, 'uye isu hatigone kumirira kugashira nharaunda yedu kune izvo zvakagadzirirwa kuve kusangana kwakakosha kwazvo. Sezvo ndichangodzoka kubva kurwendo kuenda kuLas Vegas, ini ndaona ruoko rwekutanga mashandiro atiri kuita pamwe nevatinoshanda navo - kusanganisira yedu yekutambira guta nenzvimbo nyowani - kuendesa show yakachengeteka asi isingatombo chena. Vanopinda vanogona kutarisira yakasarudzika IMEX kubata kwekunakidzwa sechikamu chechiitiko chekuratidzira, "Carina Bauer, CEO weImEX Group, anopfupikisa.
IMEX America inoitika munaNovember 9-11 kuMandalay Bay muLas Vegas ine Smart Muvhuro, inofambiswa neMPI, munaNovember 8. Kunyoresa - mahara - tinya. pano. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve sarudzo dzekugara uye kubhuka, tinya pano.